Pyrope garnet mineral bu onye otu ndi otu garnet - vidiyo
Zụta eke eke eke eke pyrope n’ụlọ ahịa anyị
Pyrope nke mineral bụ onye otu nke garnet otu. Ọ bụ naanị otu onye sitere n'ezinụlọ garnet gosipụtara oge niile na-acha ọbara ọbara n'omume ndị sitere n'okike, ọ bụkwa site na njirimara a na-enweta aha ya na Grik maka ọkụ na anya. N'agbanyeghị agbanyeghi karịa ọtụtụ garnets, ọ bụ akụ juru n'ọtụtụ ebe na ọtụtụ aha ọzọ, ụfọdụ bụ ndị na-abụghị ndị ahịa. Chrome pyrope, na Bohemian garnet bụ aha ọzọ abụọ.
Pyrope dị ọcha bụ Mg3Al2 (SiO4) 3, ọ bụ ezie na ndị ọzọ na-adịkarị ma ọ dịkarịa ala obere-ihe ndị a gụnyere Ca, Cr, Fe na Mn. Nkume etinyere usoro di omimi na almandine na spessartine, nke a na-akpọ mkpokọta garnets pyralspite: pyrope, almandine na spessartine. Dochie iron na manganese maka magnesium na Stione. A na-akọwapụta ihe na-esi na ya apụta, agwakọta nke mejupụtara ya pyrope-almandine ruru. Nkume dị oke ọnụ ahịa dị oke ọnụ rhodolite bụ garnet nke ihe mejupụtara 70% pyrope.
Isi mmalite nke pyrope dị na nkume ndị dị egwu, nke a na-ahụkarị site na mbara ala ụwa: a na-ekwu na a na-enweta ọgwụ ndị a na-egosipụta etolite na metamorphic. Ọ na-aputa na nkume metamorphic metulorphic, dịka ọ dị na Dora-Maira massif na Western Alps. N'ime uka ahụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pyrope dị ọcha na-apụta na kristal ruo ihe dị ka 12 cm n'obosara; ụfọdụ n'ime pyrope ahụ nwere nnuku nke coesite, ụfọdụ na-enwetakwa enstatite na sapphirine.
Pyrope bụ ihe a na-ahụkarị na peridotite xenoliths nke sitere na ọkpọkọ kimberlite, ụfọdụ n'ime ha bụ nke nwere diamond. A choputara ya na nmekorita nke diamond na - enwekarị ihe ndi CR2O3 nke 3 rue 8%, nke na - enye mmetuta di iche na agba odo na - acha odo odo, na - enwe otutu ahihia, na n'ihi nke a, ana - ewere ya dika ihe nlere nke kimberlite egosi ebe a na - enwe ihe ndi ozo na-eme ka pin na-ekwu banyere mmalite nke anwụrụ siri ike. A maara ụdị ndị a dị ka chrome-pyrope, ma ọ bụ G9 / G10 garnets.
N'ihe atụ, Pyrope dị nnọọ aghụghọ ịmata ọdịiche dị na almandine, agbanyeghị, o yikarịrị ka ọ ga-egosipụta enweghị ntụpọ na nsonaazụ ole na ole. Edebere usoro ndị ọzọ dị iche na tebụl dị n'akụkụ. Ekwesịrị ịkpachara anya mgbe ị na-eji akụrụngwa ndị a ebe ọtụtụ n'ime ndị edepụtara edepụtara kpebisiri ike site na pyrope toro arụmọrụ, nke dị ọcha. Ndị ọzọ, dị ka nnukwu ike ndọda, nwere ike ọ gaghị aba uru mgbe ha na-amụ obere kristal agbakwunyere na matriks nke mineral ndị ọzọ silicate. N'okwu ndị a, mkpakọrịta ịnweta na mafic na mineral ma ọ bụ mineralma nwere ike ịbụ ihe ngosi kachasị mma na garnet ị na-agụ bụ pyrope.
Na ngalaba pere mpe pere mpe, ihe ndị kacha pụta ìhè nke pyrope bụ ndị nke a na-esoro n'ọrịa ndị ọzọ na-ahụkarị: ahụ efe dị elu na ntụpọ. Ọ na-adịkarị ụcha karịa ka mineral ndị ọzọ dị na silicate na ngalaba gbara ọkpụrụkpụ, ọ bụ ezie na pyrope nwere ike igosipụta pink na-acha odo odo na-acha odo odo na ọkụ. Enweghi uzo ozo, ihe ndi ozo di nkpa na otutu ihe ndi ozo di iche-iche, na ndi ozo n’enye ha otutu ihe ekwesiri ka ejiri ha mee ka achota Pyrope n'okpuru mikroskopu.
Pyrope garnet sitere na Pailin, Cambodia
Tags Garnet, Nnukwu
Tags Agba ịgbanwe, Garnet